खानेकुरा खोज्‍न गएको छोरो फर्केन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
खानेकुरा खोज्‍न गएको छोरो फर्केन
दुई वर्षअघि कान्छो छोरा क्यान्सरबाट बित्दा जेनतेन चित्त बुझाएकी आइतीमाया चेपाङ निकुञ्जमा सैनिकको पिटाइपछि जेठो छोरो राजकुमारले पनि संसार छाड्दा सम्हालिन सकिरहेकी छैनन् । ३ दिनदेखि भोकै उनले राज्यसँग पुकारिन्, ‘ कुटे र मारेपछि न्याय चाहिन्छ ।’ डेढ वर्ष छोरी काखमा राखे र पति वियोगमा विक्षिप्त रिपुमाया प्रजाले भनिन्, ‘ शरीरभरि नीलडाम थियो , ४ गते पछि त मुखबाट रगत बग्न थालेको थियो ।’
श्रावण १०, २०७७ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — पूर्वपश्चिम राजमार्गको पिप्लेबाट झन्डै दुई सय मिटर उत्तर लागेपछि दाहिनेतिर अलि गहिरोमा जस्ताले छाएको एउटा सानो घर देखिन्छ । घरको देब्रे भित्तोमा जेनतेन इँटाको पूरै र दाहिने भित्तोमा चौथाइ जति मात्रै गारो छ । अगाडिको भागचाहिँ ह्वाङ्गै छ । पछाडिको भाग सिमेन्टको खाली बोराले बारेको छ । त्यही बोराको बारको आडमा राखेको खाटमा निस्लोट सुतेकी छन्– आइतीमाया चेपाङ ।
उनी हुन् निकुञ्जका सेनाले कुटपिट गर्दा ज्यान गुमाएका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङकी आमा । साउन १ गते राजकुमारसहित सात जना निकुञ्जभित्र गएका बेला सेनाले कुटपिट गरेको थियो । त्यसैको तोडले बुधबार राजकुमारको ज्यानै गयो । खबर सुनेपछि आइतीमाया भाउन्न भएर पल्टिइन् । बहिनी शोभा, आमाजू सीता र भाइबुहारी आशाले आइतीमायालाई केही खान भनिरहेका छन् तर उनले पानीबाहेक केही निलेकी छैनन् ।
आइतीमायालाई परेको यो दोस्रो पुत्र वियोग हो । ०७५ पुस १७ गते उनका १२ वर्षीय कान्छो छोरा आमोस क्यान्सरका कारण बिते । अहिले जेठो छोराको ज्यान गयो । रोगले छोरा बित्दा जेनतेन चित्त बुझाएकी आइतीमाया अहिले सम्हालिन सकेकी छैनन् । पुत्र वियोगले थला परेकी उनी बस्न–उठ्न गाह्रो भएकाले बिस्तारामै पल्टिरहेकी छन् । उनी धेरै बोल्दिनन् तर बेला–बेला अन्याय भयो भन्दै सुस्केरा हालिरहन्छिन् । ‘एउटा छोरो रोगले बित्यो, चित्त बुझाएँ । यो छोरो त रोगले हैन नि, कुटेर मारे । त्यसैले न्याय चाहिन्छ । मैले एक्लैले न्याय लिन सक्दिनँ तर समाज जुटाएर न्याय लिन्छु,’ बिस्तारामा पल्टेरै उनले भनिन् । उनी सुतेको ह्वाङ्गको छाप्रो पनि ऐलानी जमिनमा छ ।
घरमा आइतीमाया, श्रीमान् विष्णुलालसहित जेठो छोरा राजकुमारका श्रीमती र छोरी, माइलो छोरा र कान्छी छोरी बस्नुपर्थ्यो । यी सबै त्यहाँ कसरी अटाउन् ? त्यसैले खाना त्यही ‘मूलघर’ मा खाए पनि छोराहरू, बुहारी, नातिनी र छोरी भाडामा लिएको घरमा सुत्न जान्थे । त्यो घर ‘मूलघर’ भन्दा यस्सो माथि छ । त्यो घरको सानो पिँढीमा थिइन् रिपुमाया प्रजा चेपाङ । उनको काखमा डेढ वर्षकी छोरी एलिना खेलिरहेकी थिइन् । रिपुमाया राजकुमारकी श्रीमती र एलिना छोरी हुन् । चार वर्षअघि उनीहरूको बिहे भएको थियो । श्रीमान् बितेको सुनेदेखि उनको मनमा यसरी किन पिटेरै मारेको होला भन्ने कुरा मात्रै खेलिरहेको छ । ‘त्यो पिट्ने को हो, उसका पनि घरमा परिवार, सन्तान होलान् । पिट्नेले यसको पनि जहान केटाकेटी छन् भनेर सोच्नुपर्ने नि,’ उनले एकै सासमा भनिन्, ‘उहाँको कमाइले घरको खर्च जुटेको थियो । अब के हुन्छ ? यो छोरी कसरी हुर्काउने, कसरी पढाउने ?’
राप्ती नगरपालिका–२ पिप्ले मिलनटोलमा पाँच धुर ऐलानी जग्गामा बनेको छाप्रोबाहेक विष्णुलाल चेपाङको अरू कुनै सम्पत्ति छैन । खेती गरेर खाने जग्गा नभएकाले जेठो छोरा राजकुमार नजिकैको ब्लक उद्योगमा मजदुरी गर्दथे । विष्णुलाल पनि कहिलेकाहीं ज्यालादारीमा स–सान काम गर्थे । हुर्कंदै गरेको छोराको कमाइले जेनतेन गुजारा चलेको थियो । त्यही छोराको यो हविगत भएपछि ४१ वर्षीय विष्णुलाल विक्षिप्त छन् । ‘अरू हैन, यसरी छोरा गुमाएपछि मैले माग्ने भनेकै न्याय हो,’ विष्णुलालले पुत्रवियोगको निष्कर्ष सुनाए । मिलनचोकदेखि दक्षिण झन्डै १५ मिनेट हिँडेपछि राप्ती ड्याक आउँछ । त्यहींबाट राप्ती नदी तरेर राजकुमारसहित सात जना साउन १ गते घोंगी खोज्न निकुञ्ज छिरेका थिए । निकुञ्जभित्रको ज्युँडी खोलामा घोंगी बटुल्दै गर्दा सेनाले समाएको थियो । त्यसपछि कुटपिट गर्ने, पुसअप गर्न लगाउने, मुढा बोकाउने गरेको उनीसँगै गएका सन्तलाल चेपाङले बताए ।
राजकुमारकी श्रीमती रिपुमायाले आफूलाई घोंगी मन नपर्ने तर श्रीमान्ले रुचाउने बताइन् । ‘त्यही खाएरै गुजारा चलाउने भन्ने त हैन, रहर गर्नुभयो । मैले नजानु भनेकै हो । जानुभयो । उहाँहरू गएर गल्ती भयो होला तर यसरी पिट्न त नहुने हो,’ रिपुमायाले आँसु खसालिन् । सुरुमा पिटाइ खाएको कुरा राजकुमारले नभनेको उनले बताइन् । सर्ट खोल्दा शरीरमा डाम देखेको र ४ गतेपछि मुखबाट रगत नै निस्केको उनले सुनाइन् ।
दुई वर्षअघि राजकुमार मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका थिए । त्यो बेला उपचारपछि निको भएको उनले बताइन् । निको भएरै मज्जाले काम गरेर परिवार पाल्दै आएका थिए उनी । ‘अहिले त खै उपचार पनि गर्न पाइएन । मेडिकल लगेको हो । औषधि ल्याएर खाएको हो । निको नभएपछि अस्पताल लगेको हो । बाँच्छ कि भनेको बाँचेन । मेरो पनि ज्यानै उडेको छ । शव पनि बुझेको छैन । पोस्टमार्टम नगरी शव हेर्न पनि नपाइने भयो,’ रिपुमायाले भनिन् ।
चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सूर्य थापाका अनुसार शुक्रबार मृतकका बाबु विष्णुलाल चेपाङका तर्फबाट उजुरी परेको छ । ‘नाम किटान छैन, घोंगी टिप्न गएका बेला सेनाले समाएर कुटपिट गरेको भन्ने छ । अब यसैका आधारमा शवको पोस्टमार्टमा प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हामीले घटनाको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,’ डीएसपी थापाले भने ।
पोस्टमार्टमका लागि अस्पताललाई पत्र लेख्ने तयारी भएको उनले बताए । तर परिवारका सदस्य शव नबुझ्ने अडानमा छन् । शुक्रबार दिनभरजसो चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मृतकका परिवार र कुटाइ खाएका अन्य व्यक्तिसँग वार्ता भयो । वार्तामा तत्काल राहत दिनुपर्ने विषय पनि उठेको छ । त्यसैगरी मृतकका सन्तानको शिक्षाका लागि कोष बनाउन आग्रह गरेको वार्तामा बसेका सन्तलाल प्रजा चेपाङले बताए ।
‘राहतमा तत्कालका लागि किरियाखर्च भनेर प्रशासनले ५० हजार रुपैयाँसम्म दिने कुरा भयो रे तर यसमा कुरा नमिलेपछि हामी उठ्यौं । सहमति नहुँदासम्म हामी शव बुझ्दैनौं । न्याय मुख्य कुरा हो । प्रहरीको अनुसन्धान यसमा हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो छ । राहतका कुरा पनि जोडिएर आएका छन्,’ नेपाल चेपाङ संघ चितवनका उपाध्यक्ष इन्द्रजित चेपाङले भने ।
सैनिकको कुटाइबाट युवकको मृत्यु : सेनाले भन्यो- छानबिन सुरु भइसक्यो
निकुञ्‍जमा सैनिकले पिटेका युवकको मृत्यु
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ ०८:०१
हुँदै नभएको जग्गा ८ पटक बिक्री
मालपोत, नापी अधिकृतलगायत संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन
श्रावण १०, २०७७ प्रशान्त माली
काठमाडौँ — मालपोत कार्यालय ललितपुरमा जाली स्रेस्ता खडा गरी वर्षौंदेखि नक्कली जग्गा किनबेच भएको पाइएको छ । नापी कार्यालयमा फिल्डबुक र प्लट रजिस्ट्ररसमेत नभएको ‘डुकुछाप वडा नम्बर ४ कित्ता नम्बर १० को एक रोपनी ६ आना एक पैसा’ जग्गाको ०६६ मा लालपुर्जा बनाई आठ पटक किनबेच भएको हो ।
अन्तिम पटक ०७३ मा पाटनका संघरत्न बज्राचार्यले काठमाडौंकी जुनिता महर्जनसँग यो जग्गा किनेका थिए । सेनाले डुकुछाप क्षेत्रमा काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बनाउन थालेपछि बज्राचार्य आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाउन पुगे । त्यहाँ स्थानीय प्रेमबहादुर न्यौपानेले उक्त जग्गा आफ्नो दाबी गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । सुरुमा दुवैले आ–आफ्नो लालपुर्जा देखाएर जग्गा दाबी गरे । विवादपछि बज्राचार्य आफ्नो लालपुर्जामा उल्लेख भएको जग्गाको फिल्डबुक नापी कार्यालयमा खोज्न गए । फिल्डबुक नभेटिएपछि आफ्नो नाममा कायम रहेको स्रेस्ता नक्कली रहेको उनले थाहा पाए ।
‘मालपोतको स्रेस्तामा उल्लेख डुकुछाप वडा नम्बर ४ कित्ता नम्बर १० को जग्गा नापीनक्सामा छैन । नापी कार्यालयमा डुकुछाप वडा नम्बर ४ (क) र ४ (ख) को मात्र फिल्डबुक छ । तर, दलालहरूले नक्सा नभएको वडा नम्बर ४ र भएको ४ (क) एउटै जग्गा भनेर फसाए ।’ उनले गोदावरी नगरपालिका–८ को उक्त जग्गा २६ लाख ७० हजार रुपैयाँमा किनेका थिए ।
बज्राचार्यले न्यायका लागि धेरै पटक मालपोत, नापी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए । अन्तमा केही सीप नलागेपछि ०७६ वैशाखमा हेलो सरकारमा उजुरी दर्ता गरे । त्यसपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढ्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनबमोजिम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक भरत गौतमको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । समितिले जग्गाधनी जुनिता महर्जन, ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र नापी अधिकृतलगायत जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । यो प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्न विभागलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । विभागले पनि आवश्यक कारबाहीका लागि ०७७ जेठमा मालपोत कार्यालय लगनखेलमा पठाएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले लकडाउनका कारण कारबाही प्रक्रिया अलमलिएको बताए । ‘नक्कली लालपुर्जा बनाउन संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गरी स्रेस्ता खारेज गर्छौं,’ उनले भने, ‘पीडितलाई जग्गा वा रकम उपलब्ध भने मन्त्रालयबाट गराउन सकिँदैन ।’ बरु प्रहरीमा ठगी मुद्दामा ठाडो उजुरी दिएमा सहयोग गर्न सकिने उनले बताए । ललितपुरका मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण सुवेदीले गम्भीर विषय भएकाले कागजात नहेरीकन प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताए । ‘फिल्डमा जग्गा छैन । तर कागजमा मात्र पास गर्नु भनेको किन्नेमाथि ठूलो अन्याय पर्नु हो,’ उनले भने ।
मालपोतको अभिलेखमा भेटिएअनुसार सुरुमा जाली स्रेस्ता ०६६ मा डुकुछापका सानो सोमबहादुर दनुवारका नाममा जारी भएको देखिन्छ, जतिबेला प्रमुख मालपोत अधिकृत झंकनारायण श्रेष्ठ थिए । ०६८ मा सोमबाट कृष्णबहादुर दनुवारका नाममा आएको देखिन्छ । सोमको भने मृत्यु भइसकेको छ । त्यसपछि ०६८ असोजमा अनिता थापा, ०७१ मा कर्म महर्जन, ०७२ मा साउनमा विमला सिलवाल, ०७२ माघमा बेखारत्न महर्जनसमेत गरेर दुई जनाका नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । ०६६ देखि ०६८ सम्म श्रेष्ठ, ०७१ देखि ०७३ सम्म नारायणप्रसाद आचार्य र धनश्याम उपाध्यायले प्रमुख मालपोत अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
बज्राचार्यका अनुसार जुनिताका नामको जग्गा बिक्री गर्न सेटिङ मिलाउनेमा बुङमतीका सहदेव शाक्य, कान्छा शाक्य र अजय तुलाधर मुख्य व्यक्ति हुन् । यी तीनै जना जग्गा कारोबारी हुन् । जग्गा पास गर्दा कान्छा र अजय साक्षी पनि बसेका छन् । जग्गा पास गर्न कागजात पनि बाहिर हल्ला हुने डरले सेटिङमै लेखापढी व्यवसायी सुशान महर्जनबाट तयार पार्न लगाएको बज्राचायको भनाइ छ । बज्राचार्यले आफूलाई फसाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताए । ‘म त फसें तर मजस्तो अन्य व्यक्तिलाई फस्न दिन्नँ,’ उनले भने । सहदेवले डुकुछापको उक्त जग्गाका बारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘उहाँले लगाएको आरोप झूटो हो,’ उनले भने । कान्छाले पनि आफूले जग्गा मिलाइदिएको नभएर साक्षीमात्र बसेको दाबी गरे । ‘वडा कार्यालयले घरबाटो सिफारिस दिएपछि हामी पनि जग्गा छ भनेर ढुक्क थियौं,’ उनले भने, ‘म पनि फसें ।’
बज्राचार्यले आफूलाई फसाउनेहरूविरुद्ध ०७६ मा गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । मन्त्रालयले पनि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कार्यालयले पनि अपराध अनुसन्धान विभागलाई बोधार्थ दिएर कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ । परिसरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले ठगी गर्नेहरूलाई जसरी भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । ‘यसबारेमा पीडित पक्षले परिसरमा पनि छुट्टै उजुरी दिन सक्छन्,’ उनले भने ।
नापीनक्सा भएको डुकुछाप वडा नम्बर ४ (क) कित्ता नम्बर १० को जग्गा भने धादिङ छत्रे देउराली–२ की माइली अधिकारीका नाममा छ । उनले ०६२ मा सिङबहादुर दनुवारसँग किनेकी थिइन् । अधिकारीका श्रीमान् प्रेमबहादुर न्यौपानेले आफ्नो जग्गा देखाएर दलालहरूले सस्तोमा जग्गा पास गरिदिने प्रलोभनमा धेरै जनालाई फसाइसकेको बताए । ‘मालपोतमा रहेको नक्कली स्रेस्ता खारेज नगरीकन समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने । जुनिताले बज्राचार्यकी श्रीमती एलिसासँग गरेको बैना कागजमा भने नापीनक्सामा भएको डुकुछाप ४ (क) कित्ता नम्बर १० कै जग्गा दिने उल्लेख छ । प्रतिआना एक लाख २० हजारमा खरिद गर्ने गरी १० लाख बैना दिएका थिए ।
गोदावरी नगरपालिका–८ डुकुछापका वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामाले समस्या समाधान गर्न मालपोत कार्यालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरिसकेको बताए । ‘तर, कर्मचारीले यस विषयमा चासो दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘नापी र मालपोत कार्यालयबीच समन्वय अभावले गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।’ ललितपुरका नापी अधिकृत विनोदकुमार सिंहले आफू सरुवा भएर आएको ६ महिना मात्रै भएकाले यसबारे जानकारी नभएको बताए । ‘तत्काल यसबारे बुझेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछौं,’ उनले भने ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ ०७:५२
हुम्लामा जिप खस्दा चार जनाको मृत्यु
छपाल लामा, राजबहादुर शाही
संसदीय समितिले माग्यो कूटनीतिक भ्रमणमा कोटा
जगदीश्वर पाण्डे, जयसिंह महरा
ओली–दाहालका अडान यथावत्
सरकारले लुकाएको शिक्षा प्रतिवेदन बाहिरियो
भ्याक्सिन सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई
नेकपा विवादः ओली र दाहालबीच भएन सहमति, शनिबारको सचिवालय बैठक निर्णायक !
अपडेटः शनिबार, २० मंसिर, २०७७ । ०८ : ०० बजे
कोभिड–१९ खोप र पहुँचको चुनौती
जनार्दन थापा मंसिर १९, २०७७
कोरोना महाव्याधिले हायलकायल बनाइरहेका बेला गत नोभेम्बरमा खोपसम्बन्धी केही सकारात्मक समाचारहरू आए । प्रारम्भिक परीक्षणहरूले पछिल्ला तीनवटा खोप (फाइजर–बायोन्टेक, मोडेर्ना र अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनाद्वारा परीक्षण गरिएका) कोभिड–१९ विरुद्ध...
‘पगडी सम्भाल जट्टा’
उज्ज्वल प्रसाई मंसिर १९, २०७७
भारतमा जारी किसान आन्दोलनले तीन महत्त्वपूर्ण सत्य उजागर गरेको छ । एक, हिन्दुत्ववादी दक्षिणपन्थ तथा राष्ट्रवाद टिकाउन आम मानिसभन्दा ज्यादा घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको आड चाहिन्छ ।...
सम्पादकीय मंसिर १९, २०७७
सरकारले निर्लज्ज भएर सत्ताशक्ति दुरुपयोग गरेको चरम नमुना हो, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि बुधबार तनहुँमा भएको प्रहरी दुर्व्यवहार । सत्ता संयन्त्रको यो लाज कुनै पनि...
रूपान्तरणको बाधक को ?
उमेशप्रसाद मैनाली मंसिर १८, २०७७
विश्व तीव्र परिवर्तनको गतिसँगै अकल्पनीय जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ र यसले सरकार तथा समाजलाई रूपान्तरणका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ । यसका अतिरिक्त सकारात्मक रूपान्तरणका...
नेकपा : तीन भ्रम, एक सत्य
केशव दाहाल मंसिर १८, २०७७
नेकपा अन्त्यहीन आरोप–प्रत्यारोपमा फसेको छ । यद्यपि यो अनपेक्षित थिएन । पछिल्लोपटक अध्यक्षहरूले प्रस्तुत गरेका १९ र ३८ पृष्ठका आरोपपत्रहरू हेर्दा लाग्छ, उनीहरूबीच सम्बन्धको मैलो कटकटिइसकेको छ,...
शौचालय सहरको शोभा
दीप्स शाह मंसिर १८, २०७७
भारतीय चलचित्र ‘ट्वाइलेट : एक प्रेमकथा’ दोहोर्‍याएर हेरेकै हप्ता विश्व शौचालय दिवस (१९ नोभेम्बर) परेको संयोगमा म गर्वले यति फुलेल भएँ, साँच्चै हाम्रो त खुला...
दक्षिणपन्थी राजनीतिको नाभि
चन्द्रकिशोर मंसिर १८, २०७७
हजारौं वर्षदेखि हामीकहाँ भनिँदै आएको छ, ‘ओम् संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ।’ अर्थात्, हामी सबै सँगसँगै अघि बढौं,...
खेलकुद नियमावली नआउँदाको अन्योल
सम्पादकीय मंसिर १८, २०७७
तीन दशक पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै संघीय प्रणालीअनुकूलको खेलकुद ऐन जारी भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कतिपय अन्योल कायम छ । नयाँ कानुनले खेल...
उत्तमबाबु श्रेष्ठ मंसिर १७, २०७७
२०७७ मंसिर १७, बुधबार बिहान, यो लेख तयार पार्दै गर्दा काठमाडौंको मुटु मानिने रत्नपार्कको हावामा पीएम २.५ भनिने सूक्ष्म धूलोका कणको मात्रा ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’...
विदेशी रिझाउ, स्वदेशी कज्याउ
प्रकाशचन्द्र लोहनी मंसिर १७, २०७७
नेपालको इतिहासमा विदेशीलाई रिझाएर स्वदेशीलाई कज्याउने राज्य व्यवस्था र चिन्तनको जग जंगबहादुरको पालामा बसेको हो । त्यो बेलाको उपनिवेशवादी बेलायतबाट देश जोगाउन र देशभित्र सामन्ती शासनलाई...